NorthernAlliance (Burma) – Page3– Northern Alliance (Burma)
NAB Statement on4Dec 2016
‘Current Conditions Have Required Us to Cooperate Militarily in Aggressive Offensives to Resist the Burma Army’: Tar Parn La, PSLF/TNLA
Since the NLD-led Government’s coming to power, conflicts in Burma’s ethnic areas have intensified and widespread attacks against civilian populations have been documented by various civil society and human rights organisations. EAOs (Ethnic Armed Organisations) in the north have been on defence against intensified Burma Army attacks for months whilst the Government and Daw Aung […]
Dr.Nyo Twan Awng’s Interview
Northern Alliance meet Special Envoy H.E. Mr. Sun Guoxiang
Our Northern Alliance (Burma) comprising of (KIA, TNLA, MNDAA and AA) discussed with Special Envoy H.E. Mr. Sun Guoxiang of the People’s Republic of China to Myanmar about military conflicts and political issues currently occurring in the Northern Shan State of Myanmar for over two hours at9a.m. (Local Time in China) on 19 […]
မြန်မာတပ်မတော်မှ အပြစ်မဲ့ပြည်သူများအား စစ်ပွဲတွင်လူသားဒိုင်းကာအဖြစ်ပြုလုပ်နေသော ပြစ်မှုများအပေါ် မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်း မဟာမိတ်အဖွဲ့မှ ပြင်းထန်စွာဆန့်ကျင်ရှုတ်ချကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် ၂၀၁၆-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂)ရက် ၂၀၁၆-ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၁)ရက်နေ့၊ နံနက် ၁၀ နာရီ ၃၀ မိနစ်တွင် မုံးကိုးမြို့တွင်းရှိ မြန်မာ့တပ်မတော် ဗျူဟာကုန်းမှ မုံးကိုးအရှေ့ဖက်ခြမ်းရှိ လူနေအိမ် (၅)အိမ်ကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီး အပြစ်မဲ့ပြည်သူ (၈၀)ဝန်းကျင်ခန့်အား ဗျူဟာကုန်းသို့ ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်ကာ ဗျူဟာကုန်းနံရံပတ်လည်တွင် သံဇကာနှစ်ဆင့်ဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားပြီး လူသားဒိုင်းကာအဖြစ်ပြုလုပ်ထားပါသည်။ ၄င်းဖမ်းဆီးခံထားရသူများအထဲမှ (၃)ဦးမှာ ဖမ်းဆီးသည့်နေ့မှပင် မြန်မာ့တပ်မတော်၏ သတ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါသည်။ နိုဝင်ဘာ (၃၀)ရက်နေ့တွင် ဗျူဟာကုန်း၌ ဖမ်းဆီးထားသော ဓားစာခံများထဲမှ (၄)ဦးမှာ ပျောက်ဆုံးသွားကြောင်း ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်လာသူများထံမှ သိရှိရပါသည်။ မိမိတို့ မဟာမိတ်တပ်တို့သည် ပြည်သူလူထုများ၏ အသက်ကို စိုးရိမ်မိသဖြင့် ဗျူဟာကုန်းအား […]
缅北联合阵线声明 一、我们这次联合反击缅军，是完全出于被逼无奈之举！缅军不但不承认我们是代表本民族争取正当政治权益的组织，还在国内国际社会都在呼吁和平的时刻，不去实施真正的和平进程反而妄图消灭我们！ 二、此次联合反击意在向缅甸政府和缅军表明：只要你们继续采取大缅族主义统治缅甸其他民族，那只会让战火持续燃烧，革命行动不断涌现。 三、为获得真正的和平对话平台，我们强烈要求中国站在公正、公平的立场尽快参与调停！ 四、我们强烈支持佤邦联合党旨在帮助缅北实现停火的声明。 五、为了实现真正的和平，缅军应立即停止对克钦、德昂、果敢和若开等多地的残酷军事进攻，并从上述地区中撤出。 六、非常感谢中国收容和帮助因木姐105码、勐古、棒赛、南坎、贵概和其他地区爆发战争而流落到中国境内的所有难民。 七、同时，也非常感谢国内国际社会和各界人士对我们此次行动的理解和支持。 缅 北 联 合 阵 线 2016年11月25日
Posted on November 21, 2016 January 15, 2017
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် တိုက်ပွဲများအပေါ် ရှင်းလင်းချက်နှင့် ဒေသခံပြည်သူလူထုများအား မေတ္တာရပ်ခံချက် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၁) ရက် ၁။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၀)ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းမှစတင်ပြီး ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း မူဆယ် (၁၀၅)မိုင်၊ မုံးကိုး၊ ပန်ဆိုင်း၊ နမ့်ခမ်းနှင့် ကွတ်ခိုင်ဒေသရှိ မြန်မာ့တပ်မတော်စခန်းများအား မိမိတို့ ရက္ခိုင့်တပ်မတော်(AA)၊ ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် (KIA)၊ မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်တပ်မတော် (MNDAA)နှင့် တအာင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်(TNLA)တို့က မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်များ စစ်ဆင်ရေး အဖြစ် စတင်ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားခဲ့ပါသည်။ ၂။ ကချင်၊ ကိုးကန့်၊ တအာင်း၊ ရခိုင်နှင့် ရှမ်းအစရှိသည့် တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် မြန်မာ့တပ်မတော်က ထိုးစစ်များ ပိုမိုပြုလုပ်လာကာ စစ်ရေးဖိအားများ ဆက်တိုက်တိုးလာပါသည်။ အပြစ်မဲ့ပြည်သူလူထုရှိရာနေရာများကို ဦးတည်ပြီး ၁၀၅၊ ၁၂၀ မမ […]